गायक मिलन लामालाई आफ्नै छोराले भने: ‘विचार गर्नोस्, नातिले तपाईंको फोटोमा ढुङ्गा बरसाउला !’ « Gajureal
गायक मिलन लामालाई आफ्नै छोराले भने: ‘विचार गर्नोस्, नातिले तपाईंको फोटोमा ढुङ्गा बरसाउला !’
प्रकाशित मिति: १० चैत्र २०७४, शनिबार ०६:४९
कुरो उनै लामादाईको हो जसले ‘माझी दाई पोखरा फेवा तालको’, ‘बाटो खुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला कालिकोटको’, ‘घरमा पराल बारीमा बन्सो’जस्ता चर्चित गीत गाएका छन् । यी अर्ग्यानिक गायकसँग उनकै गृहनगर सौराहा स्थित उनकै अर्ग्यानिक क्याफेमा अर्ग्यानिक वार्तालाप भयो ।
अर्ग्यानिक यस अर्थमा की उनका गीतमा ग्रामीण परिबेशको कथा हुन्छ । क्याफेको नाम पनि ‘छेउकुना क्याफे’ राखेका छन्, ट्वाइलेटमा ‘मुत्रत्याग स्थल’ लेखेका छन्, सुत्ने कोठालाई ‘निन्द्राको उपचार स्थल’, रेष्टुरेन्टलाई ‘भोक भगाउने ठाउँ’ भन्छन् । हिजो मिलन ब्रदरसँग समसामयिक विषयमा केही अर्ग्यानिक कुराकानी भए । कुराकानी क्रममा मिलनले केही घत पर्ने कुरा गरे जो यस प्रकारका छन्:-
१. ‘पाँच पटक अमेरिका गएँ तर ग्रिनकार्ड एपलाई गरिनँ र गर्दिनँ पनि । तर, पत्नी र ससुराली चाहिँ मेरो निर्णयसँग खुसी छैनन् जस्तो लाग्छ ।’
२. लालबाबु मन्त्रीज्यु लाई मेरो सुझाव छ – ‘पीआर र ग्रिनकार्ड होल्डर लाई कारवाही मात्र होईन त्यो अवसर छोडेर आउनेलाई सम्मानको व्यवस्था पनि गर्नुहोस् ।’
३.हिजोमात्र अविवाहित छोराले भन्यो – ‘तपाईको इच्छा मुताविक म त देशमै बसौंला तर पछि नातिले ‘मेरा बाजेले कार्ड एपलाई गरी दिएका भए अहिले यस्तो दुःख त पाउँदिन थिएँ’ भन्दै तपाईँको फोटोमा ढुङ्गा बर्साउला !’ तरपनि म चाहिँ देशमै केही गर्न चाहन्छु ।
कुराकानीको निचोड: जानेलाई स-सम्मान विदाई गर्नुपर्छ, आउनेलाई प्रेमपूर्ण स्वागत भन्नुपर्छ । किनभने देश भित्रै बस्नेहरु पनि राष्ट्रघाती हुन सक्छन्, देश बाहिर रहनेहरु पनि देशप्रेमी हुन्छन् । को-कहाँ बसि रहेको छ भन्ने प्रमुख कुरा होईन, देशका लागि कसले के गरिरहेको छ, त्यो प्रमुख कुरा हो ।